အမှတ်ထပ်ဖြတ်တဲ့ ရီးရဲ ၊ ဒီဇင်ဘာ အဖွင့်လှတဲ့ EPL အသင်းကြီးများ ၊ နာပိုလီနောက် အမီလိုက်လာတဲ့ မီလန်ညီနောင်တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရအားကစား သတင်းများ - xyznews.co
အမှတ်ထပ်ဖြတ်တဲ့ ရီးရဲ ၊ ဒီဇင်ဘာ အဖွင့်လှတဲ့ EPL အသင်းကြီးများ ၊ နာပိုလီနောက် အမီလိုက်လာတဲ့ မီလန်ညီနောင်တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရအားကစား သတင်းများ
PSG တိုက်စစ်မှူး လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ တနင်္လာနေ့ ဆုပေးပွဲတုန်းက ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေဘောလုံးဆု ကို မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ PSG ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ ပရိသတ်တွေကို ခင်းကျင်း ပြသ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မက်ဆီ ဟာ ဆုပေးပွဲ အပြီးပြုလုပ်တဲ့ အောင်ပွဲခံ ပါတီ အပြီးမှာ အစာအိမ် နာကျင် ခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂါနေ့ နံနက် လေ့ကျင့်ခန်းကို လွဲချော်ခဲ့ ပေမယ့် မနေ့ ညကပွဲမှာတော့ ပါဝင် ကစားသွားခဲ့ ပါတယ် ။
PSG ဟာ မက်ဆီ နဲ့ ဘာပေ တို့ ကိုပွဲထုတ်လာပြီး အနိုင် ရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပေမယ့် နိုက်စ် ကို ဂိုးမသွင်း နိုင်ဘဲ ဂိုးမရှိ သရေ ကျသွားခဲ့ ပါတယ် ။
မက်ဆီ ရွှေဘောလုံးဆုကို ရယူ သွားခဲ့မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ကတော့ ပြင်းထန် နေဆဲပါပဲ ။
အခုနောက်ဆုံး ဝေဖန်ခဲ့သူ ကတော့ ပြင်သစ် နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ ပက်ထရိစ် အီဗရာ ဖြစ်ပြီး လီဝန်ဒေါ့စကီး ကို ရွှေဘောလုံး အစား ဆုအသစ်တခု နဲ့ နှစ်သိမ့် ခဲ့မှု အပေါ် ဝေဖန် ပြောဆို ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မက်ဆီ ရဲ့ ဖခင် ကတော့ သူ့သား ဘက်ကနေ ရပ်တည်ကာ ဝေဖန်သူတွေ ကို “bla bla bla . . . continue” လို့ ရေးသား တုန့်ပြန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မနေ့ ညက ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ မန်စီးတီး ၊ ချဲလ်ဆီး နဲ့ လီဗာပူး ၃ သင်းစလုံး နိုင်ပွဲတွေ ရရှိခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ဗီလာ ကို အဝေးကွင်းမှာ ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ယူခဲ့အပြီး မှာတော့ စီးတီး နည်းပြကြီး ဂွာဒီယိုလာ ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် နိုင်ပွဲ ၁၅၀ ကို ပွဲအနည်းဆုံး ( ၂၀၄ ပွဲ ) နဲ့ ရယူ နိုင်သူ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ကတော့ မာဆေး ဆိုက် ဒါဘီ ဟာ ယှဉ်ပြိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ ပွဲစဉ် မဟုတ်တော့ကြောင်းကို အဲဗာတန် ကို ၄-၁ နဲ့ အပြတ် ကစားပြီး အနိုင်ယူပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ မိုဟာမက် ဆာလာ ကတော့ ဒီပွဲမှာ ၂ ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကလည်း ဝက်ဖိုဒ့် ကို အဝေးကွင်းမှာ ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ယူပြီး အဆင့် ၁ နေရာမှာ ဆက်လက် ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။ ဝက်ဟမ်း ကတော့ ဘရိုက်တန် နဲ့ သရေ ကျခဲ့ပြီး အခုညမှာ ကစားမယ့် အာဆင်နယ် ကို ကျော်တက် နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို ပေးမိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ မှာတော့ ရီးရဲမက်ဒရစ် ဟာ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ ပွဲစဉ် ကို ပြန်ကစားခဲ့ပြီး တိုက်စစ်မှူးကြီး ဘန်ဇီးမား ရဲ့ ဂိုးနဲ့ အနိုင် ရရှိကာ ဒုတိယ နေရာက အသင်းကို ၇ မှတ်ထိ ဖြတ်ထား နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
စီးရီးအေ မှာတော့ ထိပ်ဆုံးက နာပိုလီ သရေကျ သွားချိန်မှာ အေစီမီလန် နဲ့ အင်တာမီလန်တို့ ဂိုးပြတ် နိုင်ပွဲတွေ ရယူပြီး အမှတ်ကွာဟမှု ကို ၁ မှတ် နဲ့ ၂ မှတ် အထိ လျော့ချ လာနိုင်ခဲ့ပြီလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမားလေး ဖာရန် တောရက်စ် ဟာ ဘာစီလိုနာ အသင်းထံ ၅ နှစ် စာချုပ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ကစားဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိ ခဲ့ပြီလို့ သတင်း တပုဒ် ပေါ်ထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး ကွင်းလယ်လူဟောင်း ယာယာ တိုရေး ဟာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အကယ်ဒမီ မှာ အလုပ်သင်နည်းပြ အဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် နေပြီး သူ့ရဲ့ နည်းပြ လိုင်စင် အတွက် လိုအပ်တဲ့ ရမှတ်တွေ ကို ရယူနေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ကစားသမား ဆာဂျီရောဘတ်တို ဟာ ပေါင်ခြံ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်တာကြောင့် ခွဲစိတ် ကုသရမှာ ဖြစ်ပြီး ၄ လ ခန့် နားရတော့မယ်လို့ ကြားသိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နည်းပြ ဇာဗီ ကတော့ လက်ရှိ အသင်းရဲ့ ညာနောက်ခံလူတွေကို သဘောမကျ ဖြစ်နေပြီး ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ဝါရင့် ညာနောက်ခံလူ ဆီဇာ အက်ဇ်ပီလီကွီတာ ကို ခေါ်ယူဖို့ ဆန္ဒ ရှိနေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ရဲ့ အာဂျင်တီးနား ခံစစ်မှူး ခရစ်ရှန် ရိုမဲရိုး ဟာလည်း နိုင်ငံ အသင်းနဲ့ ကစားစဉ်က ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည် မသက်သာလာ နိုင်သေးဘဲ ၂၀၂၂ နှစ်သစ်ကူး ကာလ အထိ နားရနိုင်ကြောင်း နည်းပြ ကွန်တီ က ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ကိုဗစ် အန္တရာယ်ကြောင့် ကြားကွင်းမှာ ကစားရနိုင်ချေ ရှိတယ်လို့ သတင်းထွက်ထားတဲ့ မန်ယူနိုက်တက် – ယန်းဘွိုင်းစ် ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ်ဟာ အခုအခါ မှာတော့ အိုးထရက်ဖိုဒ့် မှာပဲ ကစားဖို့ အဆင်ပြေ သွားခဲ့ပြီလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ယာယီ ကိုင်တွယ်မယ့် နည်းပြ ရပ်ဖ် ရန်းနစ် ဟာ မနေ့က မန်ချက်စတာ ကို ရောက်လာခဲ့ပြီး အိုးထရက်ဖိုဒ့် ကွင်းထဲကို သွားရောက် လေ့လာ ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဘရာဇီး ဘောလုံး ဂန္ထဝင်ကြီး ရော်နယ်ဒင်ဟို ဟာ ရန်ပုံငွေ ခြေစမ်းပွဲ မှာ ဟက်ထရစ် သွင်းယူပြီး ပရိသတ်တွေ ကို သဘောကျစေ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒင်ဟို က ပွဲအပြီးမှာ သူ့အနေနဲ့ မိနစ် အနည်းငယ်လောက် ကောင်းကောင်း ကစားနိုင်သေးတယ် လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မနေ့ညက ဝက်ဖိုဒ့် – ချဲလ်ဆီး ပွဲချိန် အတွင်း ရုတ်တရက် နှလုံးထဖောက်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ် ဟာ အခြေအနေ တည်ငြိမ် ကောင်းမွန်လာပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်ကြောင့် ပွဲကိုလည်း ခေတ္တရပ်နား ခဲ့ရ ပါတယ် ။
Previous Article ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ ပွဲမှာ သူ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ခြေစွမ်း အတိုင်းအတာကို ရောက်ခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် တဦးသာ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ တူချယ်
Next Article အာဆင်နယ်နဲ့ ပွဲစဉ်အတွက် အသင်းရဲ့ ဒဏ်ရာရ ကစားသမားတွေရဲ့ အနေအထားအကြောင်း update သတင်းပေးလိုက်တဲ့ ကာရစ်